Yini i-blizzard futhi yenzeka kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiphepho sezulu isiphepho, iqhwa, noma isichotho ngamandla amakhulu avame ukwenziwa ezindaweni eziphakeme zezintaba. Ziyingozi kakhulu futhi kuwo wonke umlando zidale izinhlekelele eziningana emadolobheni amakhulu. Zibangele nokufa kwabagibeli bezintaba abaningi nabagibeli bezintaba.
Uma ufuna ukwazi izici zama-blizzards nokuthi akha kanjani, qhubeka ufunda 🙂
1 Izici ze-blizzard
2 Yini Ebangela Isiphepho Sezulu?
3 Imiphumela eyingozi
4 Isiphepho esiqhwaqhwa entabeni
4.2 Ukulahleka kokubonakala
4.5 Umthwalo wengqondo
AmaBlizzards aziwa nangokuthi iqhwa, iqhwa, noma umoya omhlophe. Lapho kwenzeka isiphepho esikhulu seqhwa, amazinga okushisa ngokuvamile aba ngaphansi kwama-degree ayi-0. Enye yezimpawu zabo eziyinhloko futhi ezenza babe yingozi kakhulu yimimoya yabo enamandla. Kubantu abagibela izintaba bangabeka engcupheni yokufa, ngoba benza ukubonakala kube nzima kakhulu futhi amazinga okushisa ehla kakhulu.
Ngesikhathi se-blizzard, ngenxa yomoya onamandla, ungaba nemizwa yokushisa efinyelela ku- -20 degrees. Imimoya ingaqiniswa futhi ibe namandla futhi ifike ngejubane lika-56 km / h noma ngaphezulu. Ngokuvamile, ama-blizzards ahlala cishe amahora amathathu futhi ukubonakala kwehliswa kwaba ngaphansi kwengxenye yekhilomitha.
Yini Ebangela Isiphepho Sezulu?
Cishe noma iyiphi indawo lapho ukuwa kweqhwa njalo kungathinteka khona yiqhwa. Kuyinto engajwayelekile ukuthi yenzeka ezindaweni ezibandayo, ezifundeni eziseduze noma ezintabeni eziphakeme. Namuhla, izindawo lapho kuvame ukubhaliswa khona ama-blizzards amaningi, ngokwesibonelo, ku- I-United States nasenyakatho ye-Arizona. Kulezi zindawo kunohlelo oluphansi lwengcindezi oludlulela eningizimu futhi uma uhlelo lokucindezela okuphezulu luqala ngeGreat Basin, kuzoba neqhwa.
Ama-Blizzards akhula kakhulu ohlangothini olusenyakatho-ntshonalanga yesiphepho esinamandla. Umehluko omkhulu phakathi kwengcindezi ephezulu naphansi yiyona eyenza imimoya ibe namandla. Siyakhumbula ukuthi imimoya yenziwa ngomehluko wengcindezi phakathi kwephoyinti elinye nelinye. Umehluko omkhulu okhona kulowomfutho womoya, imimoya iyoqina.
Ngakolunye uhlangothi, amanzi ahlala efriziwe emkhathini ahlala akha amakristalu anamathela kwamanye. Njengoba amakristalu eqhwa ehlangana, akha amakhekheba eqhwa afinyelela amaphuzu ayisithupha. Futhi, lapho iqhwa liwa nemimoya inamandla amakhulu, ukubonakala kunqunywa phakathi.
Ngamafuphi, ungasho ukuthi i-blizzard iyinhlanganisela embi yeqhwa nomoya.
Ngokusobala, ama-blizzards ayingozi ngokuya ngokuthi ukuphi. Uma usekhaya, uzovikelwa. Kepha uma ikubamba usephesheya kuzoba yingozi. Uma ungaphethe isivikelo nawe, ukubanda komoya kungaholela ku-hypothermia ngakho-ke ukufa.
Uma ungena ngaphakathi emotweni, ukujikeleza kwegazi kuba nzima ngokuphelele. Ukubonakala kwehliswe kwaba ngamakhilomitha angu-0,40 nokuduma komoya kuqhuma emotweni. Lokhu kungadala ukuthi umshayeli adideke agcine esengozini.
Lapho ama-blizzards enamandla kakhulu ayakwazi ukudala ukwehluleka kumasekethe kagesi futhi abangele ukucishwa. Lokhu kwenzeka ngoba imimoya enamandla neqhwa elisindayo kulimaza izintambo.
Isiphepho esiqhwaqhwa entabeni
Sizonikezela isigaba esiphelele ukuze sichaze sonke isimo samakhaza eqhwa ezintabeni. Njengoba kushiwo ngaphambili, abagibeli bezintaba, abagibeli bezintaba, nabaqansa abaningi bafe ngenxa yabo. Lapho amazinga okushisa ajikela ngezansi -15 degrees nokubonakala kunciphile, isimo siba yingozi kakhulu.
Uma usezintabeni eziphakeme, umoya ushaya umzimba wakho nganoma yiziphi izithiyo ngokungafani nasemadolobheni. Khumbula ukuthi emadolobheni sinamabhilidi anqamula umoya. Ngaphezu kwalokho, entabeni kunezinto eziningi ezinganamathele phansi futhi ezingasishaya. Isibonelo, izinhlamvu zeqhwa ezakhekayo, amagatsha amancane namatshe ahanjiswa ngumoya.
Lapho umuntu ohamba ngezinyawo ekhuphuka intaba futhi emangazwe yisiphepho sezulu, kunemiphumela ethile ephazamisa uhambo.
Into yokuqala oyizwayo lapho ukhuphuka intaba futhi umangazwa yisiphepho sezulu yi-euphoria. Singazizwa sikhuthazekile ukukhuphuka sibhekene nobunzima obubandakanya lokhu. Lokhu kungenza masingakuboni kahle ubungozi besimo.
Uma ngesikhathi sikhuphuka intaba singazigqokile izibuko zokuzivikela, izinto esishiwo ngenhla zingasishaya. Uma isishaya esweni, ingadala izinkinga ezinkulu.
Entabeni kunezindawo ezincane lapho ibhalansi idlala khona indima ebalulekile. Umoya onamandla obangelwa yiqhwa ungasenza singalingani futhi siwe. Ngaphezu kwalokho, uma kuqhubeka kuthinta ubuso namehlo ethu, kusenza siphelelwe isineke futhi silahlekelwe ukugxila. Lokhu kungaholela ekutheni senze amaphutha. Kunconywa kakhulu ukuthi ungafulatheli umhlane wakho ukuze ubhaka ungasinqobi ngenxa yesisindo sawo.
Ngenjabulo esiyizwe ekuqaleni nokuntuleka kokubonakala, sakha ukuzethemba. Lokhu kungenxa yokuthi siphambi kwethu inselelo okufanele siyinqobe. Kodwa-ke, ukungabi nokubonakala okuhle, silahlekelwa amaphuzu ayisethenjwa athile. Ungakholelwa ukuthi uhamba endleleni efanele futhi ungalungile. Ukubonakala okuncishisiwe kusenza singabi nezethenjwa futhi, ngokuhamba kwesikhathi, awela esigabeni sokwehliswa isithunzi.
Uma sisesigangeni seqhwa ngokuphelele, isimo esinaso ngaleso sikhathi sinemibandela yokuphuma kuso. Kungenzeka ukuthi isikhathi singadlala ngathi. Singacabanga ukuthi imizuzu eminingana ingaba amahora. Kulesi simo kufanele ube nokuzimisela okuqinile.
Ngamazinga okushisa aphansi kanye nokuvunguza komoya, i-hypothermia ivela ngesikhathi esifushane. Izingubo zibonakala zingashisi, yize sinezingqimba eziyizinkulungwane. Uma sichayeka emakhazeni, umzimba wethu uzokwehlisa izinga lokushisa kwawo ube sezingeni eliyingozi. Uma okokusebenza kungekhwalithi noma umanzi ngomjuluko, ukulahleka kokushisa kuzoshesha.
Ngaphambi kwesiphepho esiqhwaqhwa entabeni, isinqumo esihle kunazo zonke kuzoba ukwehla. Akunandaba ukuthi wehla kuphi, inqobo nje uma ukuphakama kunciphile, ingozi inciphile.
Ngalolu lwazi uzobe ukulungele ukubhekana neqhwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Yini i-blizzard futhi kwenzeka kanjani